विकासको कन्तविजोगः योजना र कार्यान्वयन दुबैमा कमजोरी | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / विकासको कन्तविजोगः योजना र कार्यान्वयन दुबैमा कमजोरी
विकासको कन्तविजोगः योजना र कार्यान्वयन दुबैमा कमजोरी
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय September 14, 2018	0 153 Views
नेपाल अल्पविकसित दे श हो , यो भनिराख्नुपनेर् विषय हो इन । विकासको गति हे र्दा अझै धे रै वर्ष यही चरणमै अल्झने खतरा छ । ने पालमा यो जनाबद्ध विकास हुन थाले को ५२ वर्ष भएको छ । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको प्रभावस् वरुप २०१३ सालदे खि राष्ट्रिय यो जना आयो ग बनाएर आवधिक यो जना शुरु भएको हो  । जसअनुसार हामी अहिले त्रिवर्षीय १४ औ ं यो जनाको अन्तिम वर्षमा छौ ं । आगामी आर्थिक वर्षदे खि १५ औ ं यो जना शुरु हुँदै छ । १४ औ ं यो जनाको अन्तिम वर्षसम्म आउँदासम्म यसको नतिजा निकै निराशाजनक दे खिएको छ । यो यो जनाले अघि सारे का १४ वटा विकासका लक्षहरुमध्ये चारवटा पूरा भएका छन् भने १० वटाको परिणाम निकै निराशाजनक छ । जस् तो यो वर्षको अन्तिमसम्म पा“च सय ४५ किलो मिटर ग्रामीण सडक कालो पत्रे गनेर् यो जना छ तर अहिले सम्म ५८ किलो मिटर मात्रै कालो पत्रे गरिएको छ । पाच हजार सात सय ३५ किलो मिटर ग्रामीण सडक स् तरो न्नति गनेर् लक्ष छ तर अहिले सम्म एक हजार ४९ किलो मिटर मात्रै स् तरो न्नति गरिएको छ ।
यो भयो संख्यात्मक परिणाम । गुणात्मक परिणामको अवस् था हे नेर् हो भने हाम्रो नजिकै को क्षे त्र हे रे पुग्छ । दाङ–सल्यान–रुकुमको राप्ती लो कमार्ग कालो पत्रे भएको पाँच वर्ष पुगे को छै न तर कालो पत्रे आधा भत्किसके को छ । ग्रामीण क्षे त्रका सडक वर्षातको समयमा बन्द हुन्छन् । ने पालमा ग्रामीण सडक मौ समी सडकको रुपमा चिनिन्छन् । छिमे की भारतमै पनि कति विकट क्षे त्रमा बाह्रै महिना गाडी चलिरहे का दे खिन्छन् तर हाम्रो तिर दुई दिन पानी परे बाटो बन्द हुने अवस् था छ । दुई घण्टा पानी परे हिलो र दुई दिन घाम लागे धुलो हुने अवस् थाले हाम्रो सडकको अवस् था अध्ययन गर्न सहज गराएकै छ । कुनै पनि मुलुकको विकास तथ्यांकमा हो इन, जनताको जीवनमा दे खिनुपर्छ । तर, यहाँ न तथ्यांकमा राम्रो छ, न जनताको जीवन नै सहज छ । यसरी हे र्दा हामी विकास निर्माणमा धे रै पछाडि छौ ं भन्ने दे खिन्छ । भौ तिक पूर्वाधारको क्षे त्रमा विकास नहुँदासम्म अन्य विकास र समृद्धि फगत गफ मात्रै हुन्छ ।
हामीले १४ औ ं यो जनाको लक्ष र परिणामलाई राम्ररी नियाले र हे ¥यौ ं भने यहाँ यो जना निर्माण र कार्यान्वयन दुबै मा कमजो री छ । नीति निर्माताहरु आकाश छुने यो जना बनाउँछन् तर घर्तीको धुलो झानेर् सम्मको कार्यान्वयन संयन्त्र र क्षमताबारे सो च्दै नन् । हो इन भने पा“च सय ४५ किलो मिटर ग्रामीण सडक कालो पत्रे गनेर् यो जना बन्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा ५८ किलो मिटर मात्रै सम्पन्न हुने अवस् था आउने थिएन । लो कलाज जो गाउन चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म एक सय किलो मिटर ग्रामीण सडक कालो पत्रे गरिए पनि साढे चार सय किलो मिटर बाँकी रहन्छ । यहींने र प्रश्न उठ्छ– त्यति ठूलो यो जना कसरी बन्यो र कार्यान्वयनमा यति कमजो री किन भयो ? ने पालको विकास यो जना निर्माण राजनीतिक ने तृत्वले नै गर्छ । विकास निर्माणको यो जनाको ने तृत्व राष्ट्रिय यो जना आयो गले गर्छ, जसका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिबाटै गएका हुन्छन् ।
यसरी हे र्दा विकास यो जना राजनीतिक ने तृत्वले नै बनाउँछ भन्नु अनुपयुक्त हुँदै न । तर, समस् या के छ भने यो जना आयो ग पनि राजनीतिक अस् िथरताको मारमा छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै यो जना आयो गका पदाधिकारी पनि फे रिन्छन् । यसले पहिले को आयो गका पदाधिकारीले बनाएका यो जना नयाँ आउने आयो गका पदाधिकारीका प्राथमिकतामा पदैर् नन् । कम्तिमा विकास निर्माणमा विज्ञहरुको थिंक ट्यांक नै बनाएर सरकार जो सुकै आए पनि उनीहरुले प्राविधिक काम गनेर् स् िथति बनाए यो जना कार्यान्वयनमा पनि सहजता आउँथ्यो हो ला । ने पालमा धे रै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर विकासलगायत कुनै पनि क्षे त्रमा सो च, चिन्तन र संयन्त्रहरु बदलिएका छै नन् । कार्यान्वयन गनेर् कर्मचारीतन्त्रमा काम गनेर् भन्दा पनि तर मानेर् प्रवृत्ति अझ बढी हावी भइरहे को छ । कुन यो जना गुणस् तरीय बन्यो भन्ने मा हो इन कुन यो जना सम्पन्न भएका प्रमाणित गर्दा कति रकम आउँछ भन्ने सो चबाट कर्मचारीतन्त्र ग्रस् त छ । यो जना बनाउने निकाय अस् िथर भइरने र कार्यान्वयन गनेर् क्षे त्रले परिवर्तनको मर्मबो ध नगर्दासम्म नयाँ ने पाल सपना मात्र हुने छ । त्यसै ले नीति निर्माताहरुले अब त के ही सो च्ने कि ?
Previous: अध्ययन अध्यापन अपडेटको प्रसंग
Next: वर्षमा पाँच सय उद्यमी